पहिलो क्रिमसन पीक ट्रेलरमा अलौकिक गथिका - iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार प्रथम क्रिमसन पीक ट्रेलरमा अलौकिक गथिका
प्रथम क्रिमसन पीक ट्रेलरमा अलौकिक गथिका
by ग्यारेथ कावानाग फेब्रुअरी 15, 2015
द्वारा लिखित ग्यारेथ कावानाग फेब्रुअरी 15, 2015
[iframe आईडी = "https://www.youtube.com/e એમ્બેડ/4zBlG8Lv01k?rel=0 rel]
गुइलर्मो डेल टोरो की अवधि भयावह क्रिमसन पीकको ट्रेलर भर्खरै अनलाइन लीक भयो। गिलर्मो डेल टोरोको प्रशंसक हुनु भनेको म यो रोचक अवधारणाको साथ उसले के गर्छ भनेर हेर्न उत्साहित छु। हलिउडमा भयावह दृश्य यस समयमा धेरै बासी र सूत्र सम्बन्धी भएको छ, यस्तो देखिन्छ कि ठूलो डरलाग्दो चलचित्र रिलीजमा त्यहि बोरिंग, डिस्टेलसटर, जेनेरिक बकवास भएको छ। परिवारको भुतहालीको बारेमा चलचित्रहरू रिलीज पछि रिलीज भइरहेको छ, म भन्दै छु कि भूत वा प्रेतले परिवारलाई आतंकित गर्ने धेरै फिल्महरू राम्रो हुन सक्दैनन् यस आधारभूत आधारका साथ धेरै चलचित्रहरूले शानदार प्रदर्शन गरेका छन्। यद्यपि, यस्तो लाग्छ कि चलचित्रहरूले लेट बुनियादी प्लट रूपरेखा प्रयोग गर्‍यो भनेर पूर्ण रूपमा रचनात्मक स्वभाव वा कल्पनामा अभाव भएको थियो।
यी सबै प्रकारका चलचित्रहरू एकै भएता पनि, दर्शकहरूले यसलाई अन्धकारमा हाल्छन् जस्तो देखिन्छ, कञ्जुरिंग र अन्नाबेलले प्रयास गरे र परीक्षण गरिएका डराहरूलाई वास्तवमा डराउन नसकिने भए पनि धेरै सफल भए। भनिरहेको छ कि यो Guillermo डेल टोरो जस्तै कसैले एक ठूलो बजेट र आफ्नो कल्पना संग जंगली चलाउन को लागी प्राप्त गर्न पाउँदा स्फूर्तिदायी छ। डेल तोरो केवल एक प्रतिभाशाली कथाकार मात्र होइन जीवनलाई भय and्कर र भय -्करणीय सृष्टिहरू लाई आफ्नो कल्पनाको गहिराईबाट ल्याउने मास्टर पनि हो। यी काल्पनिक परिदृश्यहरू सँधै स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस्, केटा एक प्रतिभा हो। किन यो रोमाञ्चक छ कि क्रिमसन पीकले सबै अनौठोहरू साथै आफ्नो सृजनात्मक दिमाग भित्र रहेको एउटा ब्रह्माण्डको उसको दर्शन समावेश गर्दछ। क्रिमसन शिखरसँग केवल उपजीविका घरमा कन्टेरिजस्ट र भूत केटीहरूले चीजहरू ठोक्दैछन्, यसले असफल रहस्यका साथ भव्य पुरानो हवेलीमा मैदानबाट बाहिर पसेको कंकाल अनावश्यक संस्थालाई घुमाएको छ। यस ट्रेलरको फुटेजले मलाई डेल तोरोको आगामी एचपी लभक्राफ्ट उपन्यास: माउन्टेन्स अफ म्याडनेस अनुकूलनको लागि उत्साहित बनाउँछ। के तपाइँ क्रिमसन शिखरलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? के यो ट्रेलरले तपाईंलाई डेल टोरो ट्रयाकि Love लभक्राफ्टको लागि आश्वस्त बनाउँछ? मलाई तल टिप्पणी अनुभागमा थाहा दिनुहोस्।
पागलपनको पहाडमाबर्न गोर्मनचार्ली ह्ननामक्रिमसन शिखरक्रिमसन पीक ट्रेलरक्रिमसन पीक ट्रेलर अनलाइन चुहावट भयोडग जोन्सभूत कथाहरूगथिक त्रासguillermo del toroगुइलर्मो डेल टोरो फिल्महरूगुइलर्मो डेल टोरर डरावनी फिल्महरूएचपी लभक्राफ्टजेसिका चितस्टनजिम बीवरलेस्ली होपमिया वानिकीवोकाआधुनिक गोथिक त्रासअवधि भयानक फिल्महरूटम हिडलिस्टनक्रिमसन पीक ट्रेलर हेर्नुहोस्
प्रेतवाधित कारस्टन होटेलमा एक रात
जेम्स फ्रान्को स्टीफन कि Series श्रृंखला '11 / 22/63 in मा स्टार गर्न